Maxaa laga dheehan karaa musharraxnimada Mukhtaar Roobow ee Koonfur Galbeed Soomaaliya? – Bandhiga
Maxaa laga dheehan karaa musharraxnimada Mukhtaar Roobow ee Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Muqdisho –Shaley ayey ahayd markii Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo ahaan jiray hoggaamiyaha labaad ee Al-Shabaab, uu ku dhawaaqay in uu yahay musharrax u taagan doorashada madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo ku beegan Noofeembar 17deeda.
Haddaba, maxay uga dhigan tahay musharranimada Roobow siyaasadda Soomaaliya?
Dr Ibraahim Faarax Buursaliid,oo ka faalooda arrimaha siyaadda Soomaaliya iyo caalamka ayaa sheegay in ay keeni karto isbaddel cusub isla markaana ay soo afjarto xilligii dad gaar ah ay isku koobi jireen siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan midda maamul goballeedyada.
Buursaliid ayaa sidoo kale ku sifeeyey musharraxnimada Roobow mid dhabbaha u xaari karta in dowladda federaalka iyo maamul goballeedyada ay isku soo dhawaadaan halkaaskana ay ka dhalato “dowladnimo wanaagsan”.
Mar la weydiiyey Mukhtaar Roobow oo mar soo noqday hoggaaniyaha labaad ee Al-Shabaab sida loo arki karo doorashadiisa, waxa uu sheegay in aysan jirin wax cad ah oo tilmaamaya in uu dambi galay Shiikha kaligiisna uusan ahayn dadka isku soo taagay xil Soomaaliya oo horrey Shiikh Shariif oo ay ka wada tirsanaayeen ururadii Islaamka ee Somaaliya uu madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya, sidoo kale qaar ay hadda madaxweyne ka yihiin maamul goballeedyada, isla markaana ay jiraan xubno horrey uga tirsanaa ururadii Islaamiga ay hadda ku jiraan xildhibaannada labada aqal “Kaligiis ma ahan dambiile” ayuu yiri.
Mar la weydiiyey waxa uu ku soo kordhin karo maamulka koonfur galbeed, waxa uu sheegay in waayaragnimadiisa dhinaca ammaanka in uu wax badan uga faa’ideen doono maamulka deegannada Koonfur Galbeed isla markaana uu isbaheesi cusun la yeelan doono dowladda si uu kala furfuro maamul goballeedyada oo hadda khilaaf kale dhexeeya dowladda dhexe.
Mukhtaar Roobow ayaa Al-Shabaab isaga baxay sannadkii 2012-kii hase yeesheen waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya isku soo dhiibay bishii Ogoosto sannadkii 2017-kii.